Banyere Anyị - Civen Metal Material (Shanghai) Co., Ltd.
CIVEN Metal bụ ụlọ ọrụ ọkachamara na nyocha, mmepe, imepụta na nkesa ihe igwe nwere oke. Ntọala mmepụta anyị dị na Shanghai, Jiangsu, Henan, Hubei na ebe ndị ọzọ. Mgbe ọtụtụ iri afọ nke nkwụsi ike, anyị na -emepụta ma na -ere foil ọla kọpa, foil aluminom na alloys ndị ọzọ n'ụdị foil, warara na mpempe akwụkwọ. Azụmaahịa ahụ agbasala na mba ndị isi n'ụwa niile, ndị ahịa na -ekpuchi agha, ahụike, iwu, ụgbọ ala, ike, nkwukọrịta, ike eletriki, ngwa elektrọnik na ikuku na ọtụtụ ubi ndị ọzọ. Anyị na -eji uru ala anyị eme ihe n'ụzọ zuru oke, na -ejikọ akụ ụwa niile ma na -enyocha ahịa ụwa, na -agba mbọ ka ọ bụrụ akara ama ama n'ọhịa nke ngwa igwe zuru ụwa ọnụ ma na -enye nnukwu ụlọ ọrụ ama ama na ngwaahịa na ọrụ ka mma.
Anyị nwere akụrụngwa nrụpụta kacha elu n'ụwa na ahịrị mgbakọ, wee were ọtụtụ ndị ọkachamara na ndị ọrụ nka na ndị otu njikwa mara mma. Site na nhọrọ ihe, mmepụta, nyocha dị mma, nkwakọ ngwaahịa na njem, anyị dabara n'usoro na ụkpụrụ mba ụwa. Anyị nwekwara ikike nke nyocha onwe onye na mmepe, ma nwee ike imepụta ndị na -azụ ahịa ihe igwe ahaziri iche. Tụkwasị na nke a, anyị nwere akụrụngwa nleba anya na akụrụngwa nnwale ụwa iji hụ na ogo na ogo ngwaahịa anyị. Ngwaahịa anyị nwere ike dochie ụdị ngwaahịa ndị a na United States na Japan, na arụmọrụ ọnụ ahịa anyị dị mma karịa ngwaahịa ndị yiri ya.
Site na nkà ihe ọmụma azụmaahịa nke "ịkarị onwe anyị na ịchụso ịdị mma", anyị ga -aga n'ihu na -enweta ọganihu ọhụrụ n'ọhịa nke ngwa igwe site na ijikọ uru nke akụ ụwa niile, wee gbalịsie ike ịbụ onye na -eweta ngwaahịa dị mma n'ọhịa nke ihe ọla n'ụwa niile.
Anyị nwere ahịrị ngwaahịa RA & ED Copper Foil na ike dị ike nke R&D.
Anyị nwere ike mezuo mkpa nke ndị ahịa nọ n'etiti na ọkwa dị elu n'agbanyeghị nrụpụta ma ọ bụ arụmọrụ.
Site na nkwado ego siri ike na uru akụ nke ụlọ ọrụ nne na nna,
anyị na -enwe ike ịkwalite ngwaahịa anyị oge niile ka anyị nwee ike imeghari karịa,
na asọmpi ahịa iwe ọzọ.
Dị ka mkpa ndị ahịa si dị, anyị nwere ike mepụta ngwaahịa na -emezu ihe ndị ahịa chọrọ. Anyị nwere ahụmịhe mmepụta ihe na klaasị mbụ.
Ọla kọpa foil Production Factory
Ọla kọpa foil Production Machine
Ngwa Nnyocha Ogo